Oké ifufe Ana rutere Spain | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ dị ka ọ gaghị abịa, mana n'ikpeazụ ọ dị ka oge oke oke ifufe na Spain amalitela, ma o meela ya n'ụzọ pụrụ iche. Enwere ihe ngosi na mpaghara 43 maka oke ikuku ikuku na-adị ma nwee ike ịbụ kilomita 150 kwa elekere.
Maka oge, ndia bu nbibi nke oke ikuku mmiri Ana, nke mbụ nwere aha.
4 Ezumike nke obodo
Foto - Farodevigo, ee
N’ụbọchị nke ụnyaahụ bụ ụbọchị ụka iri na asatọ nke ọnwa Disemba afọ 10, mmiri ka edere karịa ka ọnwa dum Nọvemba gara aga dị, bụ nke butere oke osimiri ya, nke mere na ọ bụ naanị ụbọchị ole na ole gara aga ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam. Ọzọkwa, oke ikuku nke 140km / h hapụrụ karịa ndị ahịa 20.000 enweghị ike: 11.700 na Pontevedra, 5.000 na A Coruña, 3.000 na Ourense, 320 na Lugo, na ndị ọzọ n’obodo ndị dị ka Noia, Mazaricos ma ọ bụ Porto do Son.
Foto - Lavanguardia.com
Site na elekere iri nke ehihie na Sunday rue elekere asatọ nke Monday, Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ emegola mmemme iri n'ihi ọdịda ala nke mere, ma akwụkwọ ịma ọkwa, alaka osisi na ihe nke facades n'onwe ha na n'ihi nsị nke mmiri nke oke mmiri ozuzo ahụ hapụrụ.
Na Balearic akipelago 'Ana' hapuru otutu ihe. Ifufe nke ruru 90 km / h agbafeela n'oké osimiri, na-eme ka okporo ụzọ ndị dị n'ụsọ oké osimiri dị oke egwu. Isi obodo n'ógbè ahụ, bụ Palma, abụwo onye e metọrọ idei mmiri, mbuze na osisi na-ada.
Ezumike nke obodo
Ọ bụ ezie na enweghi mmerụ ahụ, na mpaghara dị iche iche dịka ụgbọ elu Andalusia agbanweela ma kagbuo. Ya mere, dabara nke ọma, 'Ana' bụ squall nke hapụrụ naanị anyị ihe ọghọm.
Ọ na-ahapụ obodo ugbu a ịga Denmark, onye a na-atụ anya na etiti ya ga-erute elekere 1 nke ụtụtụ taa. Ma anyị agaghị enwe ike ibelata nche anyị, ebe ọ bụ na ihu ọhụụ na-abịa nke ga-eme ka ọnọdụ okpomọkụ belata ma wetakwa mmiri ozuzo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ifufe Ana rutere Spen
Kedu ihe kpatara oke ifufe ji nwee aha ugbu a?
Ọnọdụ ụwa dum ga-abawanye site na 3-4 ogo site na 2050